Arrin 20 Sanno Si Qarsoodi Ah Uga Dhaxeysay Israa’iil Iyo Imaaraadka Oo La Ogaaday – somalilandtoday.com
Arrin 20 Sanno Si Qarsoodi Ah Uga Dhaxeysay Israa’iil Iyo Imaaraadka Oo La Ogaaday
(SLT-Tell Aviva)-Wargeyska Macaarif ee laga leeyahay Israa’iil ayaa qoray inuu jiro xidhiidh gaar ah oo in ka badan 20 sanno si qarsoodi ah ugu dhaxeeyey Dowladda Imaaraadka Carabta iyo Maamulka Israa’iil.
Falanaqeeyaha wargeyskaan u qaabilsan dhanka Sirdoonka Yossi Maiman ayaa sheegay in sababta xidhiidhkooda ay tahay kadib markii uu batay danaha siyaasadeed ee labada dhinac iskaga xidhan.
Yossi Maiman ayaa warbixintaan oo la daabacay sabtidii ku sheegay in Abu Dubai ay hormarisay xidhiidhka ay la leedahay Israa’iil, isagoo sheegay inay ula macaamisho sida wadan dhammeystiran.
Wargeyska ayaa sidoo kale sheegay in Dowladaha Israa’iil iyo Imaaraadka ay iska kaashadeyn sameynta isbaheysi ay ku mideysan yihiin Imaaraadka, Sacuudiga iyo Masar kaasoo loogu tallagalay in lagu tirtiro Ururka Ikhwaanul Muslimiin.
Wargeyska ayaa fashiliyay in Si ay imaaraadka u gaadho danaheeda gaarka ah ay Israa’iil laba qarni bixineysay lacagaha lagu iibinayey Hub farabadan iyo Qalabka difaaca taaso qiimaheeda lagu sheegay Boqolaal Milyaar oo dollarka taasoo laga soo iibinayey dalka Mareykanka, waxayna arrintaas keentay inay Israa’iil xidhiidh wanaagsan la yeelato Imaaraadka Carabta.
Fadeexadaan cusub ee uu faafiyey wargeyskaan laga leeyahay Israa’iil ayaa kusoo beegmaysa xilli ay Dowladaha Carabta si toos ah ula safteen Mareykanka iyo Israa’iil.